Enwere ihe na YouTube karịa pusi vidiyo ma daa mkpokọta. N'ezie, enwere otutu ihe. N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ azụmaahịa ọhụụ na-anwa ịwelite mmata ma ọ bụ ịkwalite ahịa, ịmara otu esi ede, ihe nkiri, ma kwalite vidiyo YouTube bụ nka dị mkpa nke narị afọ 21st Don'tchọghị nnukwu mmefu ego iji mepụta ọdịnaya nke na-agbanwe echiche n'ime ahịa. All ọ na-ewe bụ a ama na a ole na ole aghụghọ nke ahia. Ma i nwere ike
Monday, September 21, 2020 Monday, September 21, 2020 Madelyn Nku
Ulo oru ndi pere mpe na ndi pere mpe (SMBs) na eche nsogbu ndi anabatabeghi, ebe 43% nke ulo oru mechiri nwa oge n'ihi COVID-19 N'ihe banyere ọgba aghara na-aga n'ihu, itinyekwu ego, na ịkpachapụ anya imeghe, ụlọ ọrụ ndị na-ejere obodo SMB aka na-arị elu iji nye nkwado. Facebook na-enye Ahịa Dị Mkpa Maka obere azụmaahịa n'oge Ọrịa Facebook na nso nso a weputara ngwaahịa ọhụrụ akwụ ụgwọ na ntanetị maka ngwaahịa SMBs n'elu ikpo okwu ya - atụmatụ kachasị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ, na-enyere ndị azụmaahịa nwere mmefu ego ole na ole akawanye mbọ mbọ ahịa ha.
Site na mbido, mmemme nkwụghachi ụgwọ ikwesị ntụkwasị obi tinyegoro ụkpụrụ ị ga-eme. Ndị ọchụnta ego, na-achọ ịkwalite okporo ụzọ ugboro ugboro, ga-awụkwasị nọmba ahịa ha iji hụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ewu ewu na nke bara uru iji nye ha dị ka mkpali na-akwụghị ụgwọ. Mgbe ahụ, ọ gawara ụlọ ahịa na-ebipụta akwụkwọ iji bipụta kaadị ntụmadị ma dị njikere ibunye ndị ahịa. Ọ bụ atụmatụ egosipụtara nke ọma, dịka eziokwu site na eziokwu ahụ ọtụtụ
Wenezdee, Machị 18, 2015 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị gbara ajụjụ ọnụ Scott Brinker banyere nzukọ ọgbara ọhụrụ nke Teknụzụ, Martech. Otu n'ime ihe m tụlere bụ ọnụọgụ azụmaahịa anaghị etinye usoro maka usoro ha dị ugbu a na-arụ ọrụ. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ụlọ ọrụ ndị, dịka ọmụmaatụ, oke okwu ọnụ nke ndị ahịa, nwere ike ịnwe azụmaahịa na-eto eto ma baa ọgaranya. Mana nke a apụtaghị na atụmatụ ịzụ ahịa dijitalụ agaghị enyere ha aka. Usoro ahia dijitalụ nwere ike inyere atụmanya ha aka nyocha
Mgbe obula m nuru na mmadu amalite ahia ma obu ha nwere obere oru nke ha, ana m akwanyere ha ugwu ozugbo. Obere ulo oru mejuputara otutu netwok anyi gbasaara ma anyi nile na agbasi mbo ike izulita ibe anyi elu na oke osimiri Golayat. M agbasaghị ịdabere na obere ulo oru ihe ndị ọzọ ebe ọ bụla ahịa bụ isi ahịa… ọ bụghị naanị a nkwa, ọ bụ eziokwu. Obere ulo oru na-agbanye
Akụkụ nke ịmata ohere maka ahịa bụ ịghọta etu ndị ahịa gị si eji ngwaahịa na ọrụ gị. Ndị ọrụ anyị na-agbanwe n'ụzọ dị egwu na ngalaba azụmaahịa obere na ọkara (SMB). Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-eje ozi SMB, ị ga-ahụrịrị na ọrụ dịpụrụ adịpụ na ngwa ọrụ mmekọrịta dị iji leverage ngwaahịa na ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị B2C, ghọta na oge ọrụ na-agbanwe yana ịzụ azụmaahịa na-agbanwe. Mgbe ụlọ ahịa na-ere ahịa